Amadube Fabric Manufacturers & Suppliers - China Zebra Fabric Factory
UGreenguard FIKELELA ku-SGS UL
Isitayela Esisha Esisemfashinini Ungqimba Oluthathu lwe-Shangri-La Fabric Semi-blackout
I-Shangri-La blinds (eyaziwa nangokuthi i-sheer blinds) iwuhlobo lwamakhethini okulawula ukukhanya, anamashidi ahambisanayo anama-blade amaningi. Lapho izimpumputhe zivaliwe, ama-blades ahambisana ngokuyisisekelo namashidi amabili, futhi lapho evuliwe, ama-blades adlulela endaweni ehambisana kakhulu nepheya lamashidi. Phakathi kwazo, ishidi kanye ne-mesh kuhlanganiswe ngendwangu noma ezinye izinqubo. Lapho zonke zivuliwe, izingqimba ezimbili ze-tulle zi-perpendicular futhi zihambisana nomunye nomunye. Ngalesi sikhathi, ukukhanya kuzoncishiswa lapho kudlula ukuphakama kolunye uhlangothi lwentambo. Qhubeka nokulungisa ukuphakama kwamakhethini, izimpumputhe zizogoqa eduze kwe-axis engenhla.
Isetshenziswa kabanzi ezindlini, emahhotela, ezindaweni zokudlela, kuma-villas, ezakhiweni zamahhovisi ezisezingeni eliphezulu nakwezinye izindawo. Ngendwangu ye-Shangri-La blinds, ububanzi esibenzayo buyi-3m, kanti impahla iyi-polyester engu-100%.
Indwangu eyimpumputhe yakwaVerman ingumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyimpumputhe ye-Shangri-La, ehlanganisa isikrini sendwangu, isikrini sefasitela kanye ne-venetian blind. Inemisebenzi ye-shading kanye nomhlobiso wekhethini, okwenza kube ukukhetha okuhle ukugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya. Indwangu eyimpumputhe ye-Groeveveverman ingakulethela umuzwa osondelene kakhulu nemvelo, ukhululekile futhi ujabule, futhi ingakulethela umuzwa wokuthula nokuba sepharadesi.
Indwangu isebenzisa izintambo ezikhethekile futhi ithola ukwelashwa kokumisa izinga lokushisa eliphezulu, okuhlala isikhathi eside futhi akusuki. Indwangu ye-verman blinds yi-polyester engu-100%. Sinikeza amasampula mahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngokuqondile ngaphambi koku-oda. Ngaphezu kwalokho, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe ngamazwe.
2020 Isitayela Esisha I-Verman Blinds Indwangu 3m Ububanzi Behhovisi
Indwangu eyimpumputhe yakwaVerman ingumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyimpumputhe ye-Shangri-La. Ayigcini nje ngokugcina umphumela olimazayo weveli yendwangu eyimpumputhe ye-Shangri-La, kodwa futhi inesitayela semfashini esilula samakhethini ase-venetian. Idizayini evulekile yewebhu yendwangu eyimpumputhe ye-verman ilungele ukususwa kothuli nsuku zonke, ukwehlisa kanye nomunye umsebenzi wokuhlanza. Indwangu eyimpumputhe ka-Groeve Verman iyisinqumo esifanele sephrojekthi yakho yezimpumputhe zasekhaya. Indwangu isebenzisa izintambo ezikhethekile futhi ithola ukwelashwa kokumisa izinga lokushisa eliphezulu, okuhlala isikhathi eside futhi akusuki.
Ukugcinwa kanye nokuhlanzwa kwendwangu ye-Groumbeve zebra blinds injengoba ngezansi:
1. Ukumunca i-vacuum nokususwa kothuli.
2. Sebenzisa indwangu ethambile noma isipontshi esiswakanyiswe ngamanzi afudumele ukuze usule amakhethini ngesikhathi sokukhipha uthuli / ukuvala inzalo. Uma kunesidingo, izinto zokuhlanza ezithambile zingengezwa. Sula ngobumnene ukuvimbela ukushwabana noma ukulimaza indwangu. Ukusula kungenza ikhethini lihlanzeke.
3. Sebenzisa insimbi yesitimu ukufutha endaweni engaba ngu-10 cm ukusuka kwekhethini lendwangu, okungaba nomthelela wokukhipha uthuli / inzalo.
Indwangu ye-Silhouette Blinds ye-China Factory Supply 100% Polyester
Indwangu eyimpumputhe ye-Silhouette ingumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyimpumputhe ye-Shangri-La, kuyisinqumo sokugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya. I-blade imisiwe phakathi kwezingqimba ezimbili zezikrini. Lapho impumputhe ivuliwe, indawo ebukekayo ingabonakala ngezikrini, futhi ukukhanya okungena ekamelweni nakho kuyahlungwa ukuze kuthambe; uma impumputhe ivaliwe, ungaqinisekisa ubumfihlo bakho ngenkathi ugqamisa umumo othambile we-Shangri-La blind.
Ngamafuphi, indwangu yethu ye-silhouette blinds iyisinqumo esingcono kakhulu samafekthri ama-blinds noma abathengisi bezitolo. Singanikela ngamasampula wamahhala wendwangu yama-silhouette blinds kumakhasimende ethu. Futhi umqulu ngamunye wendwangu ye-rainbow blinds kufanele uphumelele ukuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa.
Indwangu Eqinile Yesitebhisi i-Shangri-La Blinds Fabric 100% Blackout
Indwangu ye-Ladder tape i-shangri-la blinds iwumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyimpumputhe ye-Shangri-La. Ayigcini nje ngokugcina umphumela olimazayo weveli yendwangu eyimpumputhe ye-Shangri-La, kodwa futhi inesitayela semfashini esilula samakhethini ase-venetian. I-Groeveve Ladder tape i-shangri-la blinds fabric ingakulethela umuzwa osondelene kakhulu nemvelo, ukhululekile futhi ujabule, futhi ingakulethela umuzwa wokuthula nokuba sepharadesi. Ihlukaniswe nge-semi-blackout ladder tape i-shangri-la blind fabric ne-blackout ladder tape shangri-la blind fabric.
Indwangu ye-Ladder tape shangri-la blind yi-polyester engu-100%. Sinikeza amasampula mahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngokuqondile ngaphambi koku-oda. Ngaphezu kwalokho, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe ngamazwe.
I-Design yesimanje Verman Blinds Fabric 100% Polyester
Indwangu eyimpumputhe kaVerman iwumklamo omusha sha ohlanganisa isikrini sendwangu, isikrini sefasitela kanye ne-venetian blind. Inemisebenzi ye-shading kanye nomhlobiso wekhethini. Futhi isetshenziswa kabanzi emahhovisi, ezindlini, emahhotela, ezimbonini nakwezinye izikhathi. Indwangu eyimpumputhe ye-Groupeve Verman ingakulethela umuzwa osondelene kakhulu nemvelo, ukhululekile futhi ujabule, futhi ingakulethela umuzwa wokuthula nokuba sepharadesi. Ingahlukaniswa ngendwangu ye-semi-blackout ye-verman blinds kanye nendwangu emnyama yama-verman blinds.
Indwangu ye-verman blinds yi-polyester engu-100%. Sinikeza amasampula mahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngokuqondile ngaphambi koku-oda. Ngaphezu kwalokho, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe ngamazwe.
Idizayini Entsha Indwangu Enhle Eyimpumputhe Yesilhouette engu-100% Blackout
Indwangu eyimpumputhe ye-Silhouette iyidizayini entsha sha ehlanganisa isikrini sendwangu, isikrini sewindi kanye ne-venetian blind. Inemisebenzi ye-shading kanye nomhlobiso wekhethini.
Ukugcinwa nokuhlanzwa kwezindwangu ze-Groeve zebra blinds kunjengoba ngezansi:
1. Ukuhlanza kwe-Ultrasonic kwenza indwangu ikhanye njengentsha.
2. Ukumunca i-vacuum nokususwa kothuli.
3. Sula ukuhlanza ukufeza ukuhlanza okujulile, sicela usebenzise isicoci se-vacuum esinekhanda lebhulashi ukuze ukhiphe ngobumnene. Ungasebenzisa futhi isomisi sezinwele (esingasethwanga ekushiseni) ukuze ukhiphe uthuli emhlobiso wefasitela.
Indwangu yethu ye-silhouette blinds iyisinqumo esingcono kakhulu samafekthri ama-blinds noma abathengisi bezitolo. Singanikela ngamasampula wamahhala wendwangu yama-silhouette blinds kumakhasimende ethu. Futhi umqulu ngamunye wendwangu ye-rainbow blinds kufanele uphumelele ukuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa.
Idizayini Entsha Yesitebhisi Sesitebhisi I-Shangri-La Blinds Fabric Blackout
Indwangu ye-Ladder tape shangri-la blinds iwumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyimpumputhe ye-Shangri-La, kuyisinqumo sokugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya. I-groupeve ladder tape shangri-la blind fabric ingakulethela umuzwa osondelene kakhulu nemvelo, ukhululekile futhi ujabule, futhi ingakulethela umuzwa wokuthula nokuba sepharadesi. Kuyisinqumo esifanele sephrojekthi yakho yama-blind blinds. Indwangu isebenzisa izintambo ezikhethekile futhi ithola ukwelashwa kokumisa izinga lokushisa eliphezulu, okuhlala isikhathi eside futhi akusuki.
Ubude bomqulu obungama-30m, futhi ukupakishwa kuyishubhu lephepha eliqinile umqulu ngamunye. Sinikeza amasampula mahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngokuqondile ngaphambi koku-oda. Ngaphezu kwalokho, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe ngamazwe.
Factory Price Verman Blinds Fabric Semi-Blackout
Indwangu ye-Verman blinds ingumkhiqizo othuthukisiwe wendwangu eyimpumputhe ye-Shangri-La, iwumklamo omusha sha ohlanganisa isikrini sendwangu, isikrini sefasitela kanye ne-venetian blind. Inemisebenzi ye-shading kanye nomhlobiso wekhethini. Futhi isetshenziswa kabanzi emahhovisi, ezindlini, emahhotela, ezimbonini nakwezinye izikhathi. Kuyinketho yokugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya.
Indwangu ye-verman blinds yi-polyester engu-100%. Ubude bomqulu obungama-30m, futhi ukupakishwa kuyishubhu lephepha eliqinile umqulu ngamunye. Sinikeza amasampula mahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngokuqondile ngaphambi koku-oda. Ngaphezu kwalokho, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe ngamazwe.
Indwangu Yekhwalithi Ephakeme Yesitebhisi i-Shangri-La Blinds Fabric 100% Polyester
Indwangu ye-Ladder tape i-shangri-la blinds iwumklamo omusha sha ohlanganisa isikrini sendwangu, isikrini sefasitela kanye ne-venetian blind. Inemisebenzi ye-shading kanye nomhlobiso wekhethini. Futhi isetshenziswa kabanzi emahhovisi, ezindlini, emahhotela, ezimbonini nakwezinye izikhathi. Kuyinketho yokugcina ubumfihlo nokulawula ukukhanya. Lapho impumputhe ivuliwe, indawo ekhangayo ingabonakala ngezikrini, lapho impumputhe ivaliwe, ungaqinisekisa ubumfihlo bomuntu siqu.
Indwangu isebenzisa izintambo ezikhethekile futhi ithola ukwelashwa kokumisa izinga lokushisa eliphezulu, okuhlala isikhathi eside futhi akusuki. Futhi impahla ye-ladder tape shangri-la blinds fabric yi-polyester engu-100%. Sinikeza amasampula mahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngokuqondile ngaphambi koku-oda. Ngaphezu kwalokho, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe ngamazwe.
2020 Isitayela Esisha Sendwangu Esendlalelo Kathathu Semi-Blackout
Izindwangu ze-groupeve triple layer zihlukile ngokuthungwa futhi zinhle ngokubukeka. Ukuxhuma izindwangu ezivundlile phakathi kwezingqimba ezimbili zezindwangu ezingenalutho kungagcina igumbi lithambile. Vula i-blade ukuze ulungise ukushuba kokukhanya. Indwangu yokuthungwa eyingqayizivele ingagcina umbala ungaguquki isikhathi eside. Ukufiphaza okuqinile. Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic kwezindwangu kungasetshenziswa ukwenza izindwangu zibukeke zikhanya njengezintsha.
Ngokwezici zendwangu yongqimba kathathu, ingahlukaniswa ngendwangu yongqimba emithathu emnyama emnyama kanye nendwangu yongqimba emithathu emnyama. Izinto zendwangu ye-triple layer yi-polyester engu-100%. I-Groupeve inesipiliyoni seminyaka engaphezu kwe-16 sokwenza indwangu yendwangu yongqimba enhle nephakeme kathathu.
Imfashini eyenziwe ngokwezifiso i-Shangri-La Blind Fabric Semi-Blackout
I-Shangri-La blinds iwumklamo omusha sha ohlanganisa amakhethini kagesi, izikrini zamafasitela, ama-venetian blinds nama-roller blinds. Izimpumputhe ze-Shangri-La emakethe kumele ziqhathanise izimfanelo ezimbili ezisindayo: ukucaca nokuxega. Ukucaca kubonakala ikakhulukazi ebukhulu, ukwakheka kanye nempahla yentambo engxenyeni ye-mesh. Lapho i-Shangri-La eyimpumputhe ecacile kakhulu ivuliwe, ukukhanya okungena ekamelweni kuningi futhi kuthambile; uma ivaliwe, ingabuye ifihle ubumfihlo kahle. Izinga lemiphetho exekethile libonakala ngokuyinhloko kuzinga le-polymerization ye-mesh kanye nengxenye eqinile yentambo.
Indwangu yekhwalithi ephezulu ye-Groupeve shangri-La blinds ingamelana namandla amakhulu, futhi ngeke ikhiqize ama-burrs asindayo ekusetshenzisweni kwansuku zonke. Kafushane, lapho ukhetha indwangu, sicela unake ikhwalithi, kuphela lapho ungakhetha khona indwangu ye-shangri-la blinds eyanelisayo, ekhululekile, futhi enokwethenjelwa.